प्रदीप र पूजाको जम्काभेट, त्यसपछि के भयो ? « Ramailo छ
प्रदीप र पूजाको जम्काभेट, त्यसपछि के भयो ?
फिल्म ‘प्रेम गीत’ रिलिज पछि बोलचाल समेत नगरेका नायक प्रदीप खड्का र नायिका पूजा शर्माबिच ‘एक्सक्लुसिभ ‘ रुपमा भेट भएको छ । पुतलीसडकस्थित स्टार मलमा प्रदीप र पूजाको झण्डै तीन वर्षपछि कुराकानी भएको हो ।
प्रदीप ‘लिलिबिली’ प्रचारको लागि नायिका जसिता गुरुंगसँग ‘ईन्टरभ्यु’को लागि रमाईलो छ को कार्यालय आएका थिए । ईन्टरभ्यु सकेर प्रदीप र जसिता मलको दोश्रो तलामा रहेको ‘द् सिनेमा टाइम्स’को कार्यालयमा उक्लिएका थिए । सोही समयमा पूजा ‘रामकहानी’का राम अर्थात् नायक आकाश श्रेष्ठसँग त्यहाँ आइपुगेकी थिइन् ।
प्रदीप अर्का एक सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थिए । पूजा ढोका खोलेर सरासर अफिस भित्र छिरिन् । प्रदीपलाई छल्दै उनी कुर्सीमा बसिन् । पूजालाई देखेर प्रदीप हाँस्दै बोल्न थाले । पूजा बाहिर निक्लिइन् । त्यसपछि के भयो त ? प्रदीप अन्र्तवार्तामा व्यस्त भए । पूजा केही बेर हराइन् । बोल्दा के हुन्छ त ? भन्ने कुरा आएपछि सञ्चारकर्मीद्वाय दिनेश सिटौलाको मध्यस्थकर्तामा प्रदीप र पूजा उभिएको ठाउँमा पुगे । पूजा उता फर्किइन् । प्रदीपले हाँस्दै ‘के छ’ भन्न थाले ? यतिकैमा उनीहरु सहज हुन थाले ।
किन बाहिर आएको भन्ने जिज्ञासामा ‘ईन्टरभ्यु हँदैथियो डिस्टर्व होला भनेर बाहिर आएको’ भन्ने जवाफ पूजाले दिइन् । ‘तर हुँदैन्थ्यो’, प्रदीले जवाफ फर्काइहाले । यसरी एक्कासी भेट हुँदा कस्तो लाग्यो त ? ‘सप्राइज लाग्यो नि !’ प्रदीपले भने । छोटो कुराकानीपछि उनीहरुलाई एकै फ्रेममा बसेर फोटा खिच्न आग्रह गरियो । दुवैले क्यमेरा अगाडी पोज दिए । यसमा थपिए, आकाश र जसिता । अन्त्यमा एक अर्कामा हग गर्दै प्रदीप र पूजा छुट्टिए ।
प्रदीप र पूजाको यो अकास्मत भेट र वातचितले उनीहरु सँगै फिल्म खेल्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । यसमा निर्देशक सुदर्शन थापा र निर्माता सन्तोष सेनको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ । किनकी प्रेम गीत यी चार व्यत्तिको सहकार्य र मिहेनतले चलेको थियो । फिल्मसँगै प्रदीप र पूजाको जोडीलाई दर्शकले अत्याधिक रुचाएका थिए । तस्बिर : कुशल घतानी राई
प्रदीपसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :